Suicide Squad – Mood for Movies
ဒါဟာ ဘယ်သူ့အပြစ်လဲ? အသက်သွင်းဖန်တီးသူ David Ayer အပြစ်လား။ ဇာတ်လမ်းအစစ်အမှန်မရှိတဲ့ ဇာတ်ကျောရိုးကြီးပေါ်ကနေ subplots လေးတွေနဲ့ပဲ အပေါ်ယံဖြူးထားတဲ့ ဇာတ်ညွှန်းရေးဆရာဖြစ်တဲ့ David Ayer အပြစ်ပဲလား။ ဒါမှ မဟုတ် တစ်စစီပြန့်ကျဲနေတဲ့ ဇာတ်ဝင်ခန်းလေးတွေကို ကောက်ကာငင်ကာ မှားယွင်းတဲ့ Lego အပိုင်းအစလေးတွေကို ဆက်နေသလို တည်းဖြတ်ထားတဲ့ တည်းဖြတ်သူ John Gilory ရဲ့အပြစ်တွေလား။ သေချာတာကတော့ သူတို့နှစ်ယောက်စလုံးရဲ့အပြစ်တွေပါပဲ။ ဒါမှ မဟုတ် ထိုအရာတွေကို ခိုင်းစေခဲ့တဲ့ Warner Bros ရဲ့အပြစ်ကြီးပဲလား။
ဇာတ်လမ်းကို စပြောရအောင် …
DCEU ဆိုတဲ့အတိုင်း သူတို့ဇာတ်အိမ်တည်ထားတဲ့ အချိန်က BVS ရဲ့အဆုံးမှာ Lex Luthor ဖန်တီးခဲ့တဲ့ အကောင်ကြီးနဲ့တိုက်ခိုက်ပြီး ကျွန်တော်တို့ရဲ့လူစွမ်းကောင်းကြီး Superman သေဆုံးသွားပြီးတဲ့ နောက်ပိုင်းမှာပေါ့။ ဆိုးသွမ်းတဲ့ ထောင်ကျအကျည်းချခံထားရတဲ့ လူတစ်ချို့နဲ့ဖွဲ့စည်းဖို့ Task Force X လို့အမည်ရတဲ့ အဖွဲ့တစ်ခုကို Amanda Waller ဆိုတဲ့ အစိုးရအဖွဲ့ရဲ့ အထက်အာဏာပိုင် အမျိုးသမီးတစ်ယောက်က ကြံစည်နေတယ်။ သူဖွဲ့စည်းတဲ့ ထိုအဖွဲ့ထဲမှာပါဖို့ကြံရွယ်ထားတဲ့ သူတွေကတော့ …
ဒီနေရာမှာ ထိုဇာတ်ကောင်တွေကို ကျွန်တော်ပြောပြသွားပါမယ်။
Deadshot - နာမည်အရင်းက Floyd Lawton။ ဆိုးတယ်ဆိုတာထက် အမှန်တော့ သူက ကြေးစားသေနတ်သမားတစ်ယောက်။ သူ့အစွမ်းအစကို သူယုံကြည်သလို အလွန်စီးပွားရေးဆန်သော သာမာန်လူတစ်ယောက်။ ဘာမှတော့ ထူးခြားတယ်လို့မရှိ။ ဒါပေမဲ့ သူ့ရဲ့အစွမ်းဟာ ပစ်မှတ်ကို မလွဲစွာ ပစ်တတ်တဲ့ သေနတ်သမား။ ပြောရမယ်ဆိုရင် ဒီအဖွဲ့ထဲမှာ သူသာလျှင် အတော်ဆုံးပဲ။ သူဟာ မိန်းမနဲ့ကွဲနေပြီး အလွန်တရာ ချစ်မြတ်နိုးတဲ့ သမီးလေးတစ်ယောက် ရှိတယ်။ သူ့ရဲ့အိမ်မက်တွေဟာ ထိုသမီးလေးနဲ့တစ်နေ့မှာ အတူနေပြီး နီးစပ်ဖို့ပဲ။ (ဒီဇာတ်ကားရဲ့ကျွန်တော် နှစ်သက်တဲ့ဇာတ်ဝင်ခန်းတစ်ခုက သူ့ကို Batman လာဖမ်းတဲ့အခန်းပဲ။ ဘာကြောင့်လဲဆိုရင် စာဖတ်သူတို့ကြည့်ရင်သိမှာပါ။)
Harley Quinn - သိပ်တော့ မိတ်ဆက်ပေးစရာမလိုဘူး ထင်ပါတယ်။ ဒီနာမည်ကို လူတိုင်းသိပြီးသားပါ။ အရင်က မသိခဲ့တဲ့သူတွေတောင် ခုလောက်ဆို နေရာအနှံမှာတွေ့နေရတဲ့ ကြော်ငြာတွေကြောင့် ထိုဇာတ်ကောင်ကို စိမ်းမယ် မထင်။ နာမည်အရင်းက Harleen Quinzel ။ အစက မူမှန်သမား။ စိတ်ရောဂါကု ဆရာဝန်မတစ်ယောက်။ ဒါပေမဲ့ Arkham Asylum မှာ မကုသသင့်တဲ့ လူနာတစ်ယောက်ကို ကုသနေရင်းနဲ့ထိုလူနာနဲ့စိတ်ဝင်စားမှုတွေ ခံစားမှုတွေဖြစ်လာခဲ့ကာ ထိုသူရူးလူနာ ခေါ်ဆောင်ရာအမှောင်လမ်းကို လိုက်ခဲ့ရင်းမှ အလွန်တရာ ကြမ်းတမ်းရက်စက်သော အရူးတစ်ယောက်သဏ္ဍာန်အဖြစ် နေထိုင်လာသော ဒုစရိုက်သမားတစ်ယောက် ဖြစ်လာခဲ့တယ်။ ထိုလူနာက ဘယ်သူလဲဆိုတာ ကျွန်တော် ဖွင့်ပြောပြစရာမလိုဘူး ထင်ပါတယ်။ သူမရဲ့ဇာတ်ကောင်ဟာ ဒီဇာတ်ကားကို ကယ်တင်ခဲ့တဲ့ နည်းပါးလွန်းတဲ့အရာတွေထဲက တစ်ခုပါပဲ။ ဒီဇာတ်ကားရဲ့အကောင်းဆုံးအရာတစ်ခုကို ပြောပါဆိုရင် Harley Quinn ဇာတ်ကောင်ပါပဲ။
ကျန်လူတွေကတော့ သိပ်တော့ ထူးခြားတယ် မရှိလှပါဘူး။ ဘာကြောင့်လဲဆိုရင် ဇာတ်ညွှန်းရေးဆရာက ကျန် အဖွဲ့ဝင်ဇာတ်ကောင်တွေကို သိပ်အလေးပေးခဲ့ပုံမရလို့ပဲ။ Captain Boomerang ဆိုတဲ့ ဖောက်ထွင်းရေး ဝိဇ္ဇာတစ်ယောက်။ သူကတော့ Flash ရဲ့မဟာရန်သူတော်ကြီး။ အဖွဲ့ရဲ့ ချဉ်ဖတ်တစ်ကောင်ဆိုလည်း မမှားဘူး။ သူ့ဇာတ်ကောင်ကို စိတ်ဝင်စားစေတဲ့ အပြုအမုူတစ်ချို့ကို ဇာတ်ကားမှာတွေ့ခဲ့ရပေမဲ့ ဘာကြောင့်လဲဆိုတာတွေ ပြန်လည် မရှင်းပြခဲ့ဘူး။
နောက်တစ်ယောက်ကတော့ ကျွန်တော့်စိတ်ထင် အဖွဲ့တစ်ခုလုံးမှာ အစွမ်းအပြင်းဆုံးလို့သတ်မှတ် လို့ရတဲ့ El Diablo။ သူ့မှာလည်း သူ့နောက်ကြောင်းနဲ့သူ။ သူ့အစွမ်းက မီးတွေကို ထုတ်လွှတ်နိုင်ခြင်းပဲ။ ထို သူ့ရဲ့ အစွမ်းကြောင့်ပဲ သူ့စိတ်သေဆုံးခဲ့ရတယ်။ ထို့ကြောင့်လဲ နောင်တတွေနဲ့ကျန်ရှိတဲ့အချိန်တွေကို ကုန်ဆုံးနေသူ။ ကျန်အဖွဲ့ဝင်တွေဟာ လူသတ်ဖို့ပျော်ရွှင်နေချိန်မှာ သူကတော့ ကွဲထွက်နေပြီး ထိုလူသတ်ခြင်းကို ရှောင်ကျဉ်ဖို့ကြိုးစားနေတဲ့သူ။ စိတ်ဝင်စားဖို့အကောင်းဆုံးသော ဇာတ်ကောင်တစ်ယောက်။
ခုတစ်ယောက်ကတော့ Killer Croc တဲ့။ အမှန်တော့သူဟာ Comics တွေမှာ Batman နဲ့ ရင်ဆိုင်ခဲ့တဲ့ လူဆိုးကြီးလေ။ ရုပ်ရှင်ထဲမှာတော့ သူ့ရဲ့နောက်ကြောင်းကို တခြားဇာတ်ကောင်တွေလို မရှင်းပြခဲ့။ Croc ဆိုတဲ့အတိုင်း မိကျောင်းကြီးတစ်ယောက်လို ပုံစံဖြစ်နေကာ ထိုအတိုင်း စားသောက်နေထိုင်တဲ့ အလွန်တရာ အကျည်းတန်တဲ့ လူဆိုးကြီးပေါ့။ သူ့ရဲ့နောက်ခံဇာတ်ဝင်ခန်းတွေ အများစုကို ဖြတ်ပစ်ခဲ့ကြတယ်လို့သိခဲ့ရတယ်။
ခု နောက်ဆုံးတစ်ယောက်ကတော့ လူသိအရမ်းနည်းတဲ့ Slipknot။ သူ့အစွမ်းကတော့ နာမည်အတိုင်း ကြိုးကို အသုံးပြုရာမှ အလွန်တရာမှ ကျွမ်းကျင်တဲ့ သူတစ်ယောက်။ ဇာတ်ကားထဲတွင် သူ့ကိုမိတ်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့ အလွန်နည်းပါးလွန်းခဲ့တယ်။ ဇာတ်ဝင်ခန်းလည်း အရမ်းနည်းလွန်းတယ်။ ထည့်တောင် မထည့်သင့်ခဲ့ဘူး။
ကဲ .. ထိုလူဆိုးတွေကို ထိန်းဖို့ကြီးကြပ်ဖို့ထည့်လိုက်တဲ့သူက Colonel Rick Flag ဆိုတဲ့ စစ်သားတစ်ယောက်။ (ကျန်စစ်သားအနည်းအကျဉ်းတော့ ပါတာပေ့ါဗျာ။) ထိုအဖွဲ့ရဲ့ ဦးဆောင်သူဆိုလည်း မမှားဘူးပေ့ါ။ သူ့မှာ ချစ်တဲ့သူတစ်ယောက် ရှိတယ်။ သူမနာမည်က June Moore ။ သူမက ရှေးဟောင်းသုသေတနသမားတစ်ယောက်။ ရှေးခေတ်ဟောင်းက ဝိညာဉ်တိစ္ဆေ မကောင်းဆိုးဝါးမ တစ်ယောက်ရဲ့ဝင်ယောက် ပူးကပ်ခြင်းကို ခံခဲ့ရသော အမျိုးသမီး။ ထိုမကောင်းဆိုးဝါးကိုတော့ အလွယ်တကူပဲ Enchantress လို့အမည်ပေးလိုက်တယ်။ သူမဟာ တစ်ခါတစ်ရံ June Moore ဖြစ်လိုက်။ တစ်ခါတစ်ရံ Enchantress ရဲ့အသွင်ပေါ်လာလိုက်နဲ့အစွမ်းအရှိဆုံးတစ်ယောက်ပေါ့။ ထို Enchantress ရဲ့နှလုံးကိုတော့ Amanda Waller က သိမ်းဆည်းထားတယ်။ သူသိတယ်လေ။ ထိုနှလုံးသားကို Enchantress ပြန်လည် ရရှိရင် မလိုလားအပ်တဲ့ ဖြစ်ရပ်တွေကို ဦးတည်လာနိုင်တယ်ဆိုတာပဲ။
အဲ .. ထို Rick Flag ဆိုတဲ့ စစ်သားကို ကာကွယ်ဖို့Bodyguard အဖြစ်လိုက်လာရတဲ့သူက Katana လို့အမည်ရတဲ့ Japan အမျိုးသမီးဓားသမား။ နာမည်အရင်းက Tatsu Yamashiro။ သူမကိုင်ဆောင်ထားတဲ့ ဓားက ဟိုးအတိတ်က သူမရဲ့ခင်ပွန်းကိုလူဆိုးတစ်ချို့သတ်ပစ်လိုက်တဲ့ ဓားပဲ။ ထိုဓားထဲမှာ သူမခင်ပွန်းရဲ့ဝိညာဉ်ဟာ လှောင်ချုပ်ခံထားရတယ်။ ဒါကြောင့်လည်း ထိုဓားကို ဝိညာဉ်ယူသောဓားလို့အမည်ပေးထားကြတာပေါ့။ ထိုဓားကို 14 ရာစုလောက်က နာမည်ကျော် ဓားဖန်တီးသူ Muramasa ကြီးကိုယ်တိုင်က ဖန်တီးပြုလုပ်ထားတဲ့ဓား။ ထိုဓားနဲ့အသတ်ခံရတဲ့သူတွေရဲ့ဝိညာဉ်တွေဟာ ထိုဓားထဲမှာပဲ ထိန်းသိမ်းထားခြင်းခံရတယ်။ ဒါကြောင့်လည်း တစ်ခါတစ်ရံ Katana က သူမရဲ့ဓားကြီးကို ထုတ်ကာ ခင်ပွန်းဖြစ်သူရဲ့ဝိညာဉ်နဲ့စကားပြောပြောလေ့ ရှိကာ ငိုယိုတတ်တယ်။
ဟူး … မောလိုက်တာဗျာ။ ပြဿနာက အဲ့ဒါပဲ။ များပြားလိုက်တဲ့ ဇာတ်ကောင်တွေ။ အလွန်များလွန်းတဲ့ ဇာတ်ကောင်တွေကို ပြသချိန်ကာလ ၂ နာရီဝန်းကျင်ခန့်လေးအတွင်းမှာ ပြွတ်သိပ်ပြီးထည့်ထားလိုက်ကြတယ်။ ခက်တာက ဇာတ်လမ်းရဲ့First Act ဟာ ထိုဇာတ်ကောင်တွေကို မိတ်ဆက်ပေးတာနဲ့ပဲ ကုန်ဆုံးသွားတယ်။ ဇာတ်လမ်းအတွက် အချိန်မပေးလိုက်နိုင်ခဲ့ကြဘူး။ ထို့ကြောင့် ဇာတ်လမ်းဟာ ပြီးစလွယ်ဖြစ်သွားခဲ့တယ်။ အခြေအမြစ်မရှိတဲ့ ဇာတ်လမ်းကြီးအဖြစ် ရောက်မှန်းမသိရောက်သွားရတော့တယ်။ ဒီမှာတင်ပဲ Suicide Squad ရုပ်ရှင်ဟာ အပိုရုပ်ရှင်တစ်ခု ဖြစ်လာရတော့တယ်။ များပြားတဲ့ ဇာတ်ကောင်တွေကို ထည့်ထားခြင်းဟာ ဒီဇာတ်ကားရဲ့ပထမဆုံးအမှားပဲ။ ပိုဆိုးတာက Harley Quinn ကလွဲရင် ကျန်ဇာတ်ကောင်တွေဆိုတာ ပရိသတ်တွေ သိပ်သိတာမဟုတ်။ ကျွန်တော်ဆို အရင်က Harley Quinn တောင် သေသေချာချာဂဂနန သိခဲ့တာမဟုတ်။ ပရိသတ်တွေ မရင်းနှီးသေးတဲ့ ဇာတ်ကောင်တွေကို အချိန်တိုလေးအတွင်းမှာ အကျဉ်းချုံးပြီး ခပ်မြန်မြန် မိတ်ဆက်ပေးလိုက်ကြတယ်။ ပရိသတ်ဟာ သူတို့ခေါ်ဆောင်ရာနောက်ကို ဒီနေရာမှာတင် မလိုက်နိုင်ကြတော့ပေ။ ဇာတ်ကောင်တွေနှင့် ပရိသတ်တို့စိတ် တစ်သားတည်းမကျခဲ့တော့ပေ။ ဒီမှာတင် ပရိသတ်ရဲ့စိတ်ပါဝင်စားမှု လျော့နည်းလာတယ်။
Cinematography အကြောင်းဆိုရင်တော့ သိပ်တော့ ပြောစရာမရှိ။ ချီးမွမ်းစရာလည်း မရှိသလို ကဲ့ရဲ့ဝေဖန်စရာလည်း မရှိ။ ကျွန်တော် သတိထားပြီးမကြည့်မိခဲ့တာလည်း ပါတယ်။ ဘာကြောင့်လည်းဆိုတော့ ပြန့်ကျဲနေတဲ့ ဇာတ်လမ်းကို မနည်းအာရုံထားပြီး လိုက်နေရလို့Cinematography ကို ကျွန်တော်အာရုံမထားနိုင်ခဲ့ပေ။ Production Design ကတော့ အစုတ်ပဲ့ဆုံးပဲ။ ဇာတ်ဝင်ခန်း ဇာတ်ဝင်ခန်းတိုင်းဟာ အတုတွေမှန်းသိသာလွန်းတယ်။ သဘာဝကျသော အခန်းတွေ ရှားတယ်။ Man of Steel ကစလို့BVS ရော ယခု Suicide Squad ပါ Production Design အရမ်းညံ့လွန်းတယ်။ DC နဲ့Warner Bros. တို့ဟာ သူတို့ရဲ့Production designers တွေကို လဲသင့်ပြီလို့ကျွန်တော်ထင်တယ်။ ဒီလို Settings တွေနဲ့သာ ကျန်ဇာတ်ကားတွေကို ဆက်လက်ရိုက်ကူးနေမယ်ဆိုရင်တော့ DC ရုပ်ရှင်တွေကို ကျွန်တော် ကြည့်ဖို့ဝန်လေးလာမှာပါ။ နောက်ပြီး CGI Effects တွေ။ 2000 ပြည့်နှစ် ဝန်းကျင်ခဲ့က CGIs တွေပါတဲ့ ဇာတ်ကားတွေကို စာဖတ်သူတို့မှတ်မိကြပါသလား။ သိပ်မတိုးတက်သေးတော့ အပေါစားသဏ္ဍာန်ဖြစ်နေခဲ့တဲ့ CGI တွေပါတဲ့ ရုပ်ရှင်တွေလေ။ ယခု Suicide Squad လည်း ထိုနည်း၎င်းပဲ။ ကိုယ်ကြည့်နေတဲ့ ရုပ်ရှင်ကားဟာ 2016 မှာထွက်တဲ့ ရုပ်ရှင်ဆိုတာ နည်းနည်းလေးမှ ယုံကြည်စရာကို မရှိတာပါ။ ဒီဇာတ်ကားမှာ အသုံးပြုခဲ့တဲ့ CGIs တွေဟာ 15 နှစ်လောက် နောက်ကျနေတဲ့ CGIs တွေအလား ပေါချာလွန်းခဲ့ပြန်တယ်။
Suicide Squad ရဲ့ကောင်းကွက်တွေဟာ နည်းပါးလွန်းတယ်။ မရှိတာတော့ မဟုတ်။ ရှိတယ်။ ပြီးရင် ဆက်ပြောမယ်။ ခုလို ဘာကြောင့် ညံ့ဖျင်းတဲ့ ဇာတ်ကားအဖြစ် ဇာတ်သိမ်းသွားရသလဲဆိုရင် ကျွန်တော့်အမြင်မှာတော့ DCEU ဟာ MARVEL ကို အလွန်နိုင်ချင်တဲ့ ဆန္ဒလောဘေတွေကြောင့်ပဲ။ DC ဟာ အမြဲကိုယ်ပိုင်ဟန်နဲ့ရှင်သန်လာခဲ့တယ်။ ကျွန်တော်ဟာ DC ရဲ့အမာခံပရိသတ်တစ်ယောက်။ Comics တွေဝယ်ဖတ်ရင်တောင် DC ရဲ့စာအုပ်တွေပဲဝယ်တယ်။ ဈေးဘယ်လောက်ကြီးကြီး၊ ကျွန်တော် ဂရုမစိုက်ပါဘူး။ ဘာကြောင့်လဲဆိုရင် ကျွန်တော် DC အပေါ်မှာထားတဲ့ အားပေးမှုပဲ။ DC Comics တွေကလည်း ပိုကောင်းတာကိုး။ ဒါပေမဲ့ ခုနောက်ပိုင်း ရုပ်ရှင်တွေမှာတော့ DC ဟာ ကိုယ်ပိုင်ဟန်လည်း ထိန်းသိမ်းချင်တယ်။ ပြီးတော့ MARVEL ကိုလည်း အတုခိုးချင်တယ်။ MARVEL က အပျော်အပျက်တွေထည့်တော့ ဝေဖန်ရေးဆရာတွေက သဘောကျတယ်ဆိုပြီး Light humours လေးတွေလည်း ထည့်လိုက်ချင်သေးတယ်။ ဒါပေမဲ့ သူတို့ရဲ့ Jokes တွေဟာ MARVEL ရုပ်ရှင်က ဟာသတွေလို ရယ်စရာ မကောင်းခဲ့ပေ။ သူတို့ဟာ MARVEL ရဲ့Guardians of the Galaxy ဆန်ဆန်မျိုး Suicide Squad ကို အသက်သွင်းဖို့ကြိုးစားကြတယ်။ ထိုအချက်ကြောင့်ပဲ ဒီဇာတ်ကားဟာ ပျက်စီးသွားခဲ့ရတယ်လို့ကျွန်တော်ကတော့မြင်တယ်။ မှတ်မိကြမလားတော့ မသိဘူး။ March လလောက်က BVS ကျရှုံးသွားတော့ Warner Bros. က လူတွေ ယခု Suicide Squad ရုပ်ရှင်ရဲ့တစ်ချို့ဇာတ်ဝင်ခန်းတွေကို ပြန်လည်ရိုက်ကူးစေခဲ့တယ်။ ပြန်လည်ရိုက်ကူးတယ်ဆိုကတည်းက ထိုဇာတ်ဝင်ခန်းအသစ်တွေသည် ဘယ်တော့မှ မူလဇာတ်ဝင်ခန်းတွေလောက် မကောင်းနိုင်ပေ။
ယခု Suicide Squad ဟာထိုအရာကို အများဆုံးခံခဲ့ရတယ်။ မြေစာပင်ဖြစ်ခဲ့ရတယ်။ ပရိသတ်တွေဟာ လူဆိုးတွေကို မသိစိတ်က ချစ်ကြတယ်။ အားပေးကြတယ်။ ဥပမာ .. The Dark Knight ရဲ့Joker တို့Breaking Bad တို့Game of Thrones တို့Hannibal တို့ Dexter တို့အများကြီးပါ။ ဒါကြောင့်လည်း ခု Suicide Squad ထွက်မယ်ဆိုတော့ ပရိသတ်တွေ အလွန်စိတ်ဝင်စားခဲ့ကြတယ်။ ကျွန်တော်အပါအဝင်ပေါ့။ Darkness ပိုဆန်မယ်။ Violence တွေကလည်း ပိုကြမ်းတမ်းမယ်။ လူဆိုးတွေချည်းပဲကို ကြည့်ရမယ်။ ဒါတွေဟာ လွန်ခဲ့တဲ့ 10 လလောက်က ကနဦး ဖြစ်ပေါ်ခဲ့တဲ့ ကျွန်တော့်ရဲ့ခံစားချက်တွေ။ ထိုခံစားချက်တွေကို ဘယ်အချိန်မှာ အတည်ပြုပေးလိုက်လည်း ဆိုတော့ Suicide Squad ရဲ့ပထမဆုံး Trailer စထွက်လာတဲ့အချိန်မှာပဲ။ Mystery ဆန်ဆန် Tragic ဆန်ဆန် Dark ဆန်ဆန် Violence ဆန်ဆန် ဆိုတဲ့ ပုံစံမျိုးလေးနဲ့လေ။ သေချာပါတယ်။ တစ်ကယ့်ဇာတ်ကားကသာ ထို ပထမဆုံး Trailer ကဲ့သို့တင်ဆက်နိုင်ခဲ့လျှင် ယခုဇာတ်ကားသည် 2016 ရဲ့အကောင်းဆုံးဇာတ်ကားတွေကထဲက တစ်ကားဖြစ်လာခဲ့မှာ သေချာပါတယ်။ အခုတော့ မှန်းချက်နှင့် လွဲခဲ့တယ်။ ရုပ်ရှင်ဟာ light humours တွေနဲ့Darkness တွေကြားမှာ ရည်ရွယ်ချက်မရှိ ပျောက်ဆုံးသွားရတော့တယ်။
သို့သော် ဇာတ်လမ်းကတော့ ကျွန်တော်တို့အကုန်လုံးထင်ထားခဲ့သည့်အတိုင်း တစ်ခုမှ မဟုတ်ခဲ့ပေ။ ကျွန်တော်တို့မှန်းခဲ့တာတွေ လွဲခဲ့တယ်။ ကျွန်တော်သိချင်ခဲ့တာတွေလည်း မသိခဲ့ရပေ။ အထူးသဖြင့် Batman နဲ့Joker နဲ့Robin တို့ရဲ့နောက်ခံဇာတ်လမ်းအချို့။အဓိက လူဆိုးရန်သူနဲ့ပတ်သက်ပြီး လွဲခဲ့သလို Harley Quinn နဲ့ပတ်သက်ပြီးလည်း လွဲတယ်။ ဒါကတော့ ကျွန်တော် နှစ်သက်ခဲ့တဲ့ ပထမအချက်တစ်ခုပဲ။ သူတို့ဇာတ်လမ်းကို ဦးတည်သွားတဲ့နေရာက ကျွန်တော်တို့အကြိုက်မဟုတ်ခဲ့ပေမဲ့ Surprise တော့ ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ နောက်ထပ် နှစ်သက်မိတဲ့အရာက ထည့်သွင်းထားတဲ့ Music တွေ။ ပထမ 15 မိနစ်ခန့်ဟာ ထို Music တွေနဲ့တင်ပဲ ကြွေနိုင်လောက်တယ်။
အကောင်းဆုံးအရာတွေကတော့ သရုပ်ဆောင်တွေပဲ။ Jared Leto ကလွဲလို့ကျန်သူအားလုံးနီးပါးဟာ အပိုအလို မရှိခဲ့။ အကောင်းဆုံးလို့တောင် ဆိုနိုင်လောက်ခဲ့တယ်။ Will Smith ရဲ့Deadshot ဆိုရင် ကျွန်တော့်အတွက် ကြည့်ဖူးသမျှ Will Smith ဇာတ်ကောင်တွေထဲမှာ ကျွန်တော်အကြိုက်ဆုံးဇာတ်ကောင် ဖြစ်လာခဲ့တယ်။ သူနဲ့လည်း လိုက်ဖက်တယ်လို့ခံစားရတယ်။ တစ်ကယ်ပါ။ ကျွန်တော် ဒီရုပ်ရှင်မှာ Will Smith ကို အလွန်သဘောကျခဲ့တယ်။ သူကိုယ်တိုင်လည်း Navy SEALS တွေနဲ့အတူ သေနတ်ပစ် လေ့ကျင့်ခဲ့ရတယ်။ ဒါကြောင့်လည်း သူ့ဇာတ်ကောင်ကိုကြည့်ရတာ အလွန်အားရကျေနပ်ခဲ့တာ နေမယ်။ နောက်တစ်ယောက်ကတော့ ကျွန်တော်မပြောလည်း သိကြမယ်ဖြစ်တဲ့ Maggot Robbie ။ တစ်ခြားသူတွေရဲ့စကားကို ယူသုံးရမယ်ဆိုရင် သူမဟာ Harley Quinn ဇာတ်ကောင်ကို သရုပ်ဆောင်ဖို့မွေးဖွာခဲ့တယ်လို့ပင် ပြောစမှတ်ပြုရသည်အထိ ကောင်းမွန်ခဲ့သည်။ Suicide Squad ကိုကယ်တင်ခဲ့တဲ့ သူနှစ်ယောက်ကတော့ အထက်ဖော်ပြပါ Will Smith နဲ့Maggot Robbie တို့ပါပဲ။ သူမရဲ့ရူးသွပ်တဲ့ဇာတ်ရုပ်၊ စွဲဆောင်မှုအပြည့်ရှိတဲ့ အသွင်၊ ကြမ်းတမ်းတဲ့ပြကွက်၊ ရက်စက်တဲ့အပြုအမူ၊ ကျန်သရုပ်ဆောင်များအပြင် ပရိသတ်တွေကိုပါ မျက်စိကျ အာရုံရောက်စေတဲ့ ဇာတ်ရုပ်မျိုး သူမဖန်တီးပေးခဲ့တယ်။ Spolier တစ်ခုပြောပြလိုက်မယ်။ Harley Quinn ငိုတဲ့အခန်းလေးမှာ သင်တို့သူမကို သနားမိမှာ အမှန်ပါပဲ။ သြော်… Harley လည်း ခံစားချက်ရှိတဲ့ မိန်းကလေးပဲဆိုတဲ့ ခံစားချက်လေး ဖြစ်လာမိမှာပါ။
ရုပ်ရှင်ထဲမှာတော့ မသိ။ အပြင်မှာ သရုပ်ဆောင်တွေကတော့ အလွန်ကို အတွဲညီခဲ့တယ်လို့ဆိုရမယ်။ သူတို့တွေ အမှတ်တရအနေနဲ့တောင် "SKWAD" ဆိုတဲ့ Tattoos တွေကိုယ်စီထိုးခဲ့ကြတယ်။ သူတို့တွေအတူတကွ ပူးပေါင်းပြီး သရုပ်ဆောင်ခဲ့ကြတယ်ဆိုတာ ရုပ်ရှင်ရဲ့ဇာတ်ဝင်ခန်းတွေကိုကြည့်ရင် မြင်နိုင်ပါတယ်။ Teamwork ဆိုတာ ဒါကိုပြောတာလေ။ Cara Delevingne သရုပ်ဆောင်တဲ့ Enchantress အခန်းတွေကလွဲရင်ပေါ့။ သူသရုပ်ဆောင်တာကိုပဲ ကျွန်တော်မနှစ်သက်ခဲ့တာလား၊ ဒါမှမဟုတ် ညွှန်ပြတဲ့သရုပ်ဆောင်မှုးကပဲ အသုံးမကျတာလားတော့ မသိ၊ ဇာတ်ကားသာ ပြီးဆုံးသွားတယ် တစ်ချိန်လုံး ဘာတွေလုပ်နေမှန်းကို မသိခဲ့။
ကောင်းပြီ။ ဒီနေရာမှာ အဓိကအကျဆုံးဇာတ်ကောင်ကို ပြောရမဲ့အချိန်ရောက်လာပြီ။ The Joker. လူတိုင်းကြိုက်တဲ့ Joker ။ လူတိုင်းမျှော်လင့်ထားတဲ့ Joker ။ ဒီရုပ်ရှင်ကို သွားရောက်ကြည့်ရခြင်းရဲ့အဓိကအကျဆုံး အကြောင်းရင်းဖြစ်တဲ့ Joker ။ ဒါပေမဲ့ မေးခွန်းက ကျွန်တော်တို့မျှော်လင့်ထားခဲ့သလို Joker ဟာ လိုအပ်ချက်တွေကို ဖြည့်ဆည်းသွားပေးခဲ့ရဲ့လား။ အတိအကျတော့ တပ်အပ်ကြီးမပြောနိုင်ဘူး။ ဘာကြောင့်လည်းဆိုတော့ သူပါဝင်တဲ့ နည်းပါးလွန်းတဲ့ ဇာတ်ဝင်ခန်းပမာဏကြောင့်ပဲ။ ဇာတ်ဝင်ခန်းနည်းပါးလွန်းတဲ့အတွက် ဝေဖန်ရတာ ခက်တယ်။ တစ်ခြားအရင် Jokers တွေနဲ့ယှဉ်ဖို့ကြပြန်တော့လည်း မတရားတာကျပြန်ရော။ ကြားရတာတော့ သူ ပါဝင်တဲ့အခန်းတော်တော်များများကို ဖြတ်ပစ်ခဲ့ကြလို့နောက်ဆုံး ပိတ်ကားပေါ်ရောက်တဲ့အခါ သူ့ဇာတ်ဝင်ခန်းတွေနည်းပါးခဲ့တယ်လို့သိရတယ်။ အမှန်တော့လည်း ဒီဇာတ်လမ်းက သူ့ရဲ့ဇာတ်လမ်းမှ မဟုတ်တာပဲ။ သက်သက်အပိုဇာတ်ကောင်တစ်ခုဖြစ်နေခဲ့တယ်။ Harley Quinn ဇာတ်ကောင်ရဲ့အတိတ်ကို ပြန်လည် ပြသချင်တာတစ်ခုကြောင့်ပဲ Joker ကို သူတို့ထည့်ခဲ့ကြတာဖြစ်တယ်။ ဒါပေမဲ့ လိုအပ်လားဆိုတော့ မလိုအပ်ဘူး။ အကြောင်းမဲ့သက်သက် Promotional material တစ်ခုသာ ဖြစ်ခဲ့ပုံရတယ်။ ပြီးတော့ နောင်မှာ ရိုက်ကူးမဲ့ DCEU ဇာတ်ကားတွေမှာ Joker ကိုထည့်ချင်ရင်လည်း ပရိသတ်နဲ့မစိမ်းကားအောင်ဆိုတဲ့ သဘောမျိုးနဲ့ရယ် ပရိသတ်တွေ လက်ခံလား လက်မခံဘူးလားဆိုတာကို စမ်းသပ်ချင်တဲ့အကြောင်းတရားတွေကြောင့် ထည့်ခဲ့တာလို့ပဲ တွေးမိတယ်။
ဒီ Joker ကို ကျွန်တော်ကြိုက်လား။ မကြိုက်ပါ။ လုံးဝကြီး မနှစ်သက်ခြင်းတော့ မဖြစ်ခဲ့ပေမဲ့ Heath Ledger ရဲ့Joker နဲ့ယှဉ်ကြည့်မိရင်တော့ Jared Leto ရဲ့Joker သည် အရာရာလိုအပ်နေတဲ့ Joker တစ်ယောက်လို့မြင်မိတယ်။ သူဟာ သာမန် Gangster တစ်ယောက်အသွင်ပုံစံပဲ ပေါက်နေခဲ့တယ်။ သူနဲ့Harley Quinn ရဲ့Relationship ကိုသရုပ်ဖော်ထားခြင်းကြောင့်လည်း သူ့ကို weak Joker တစ်ကောင်လို့ထင်မိတယ်။ နောက်တစ်ချက်က Heath Ledger ရဲ့Joker ဇာတ်ကောင်ကို ကျွန်တော်တို့ရဲ့မှတ်ဉာဏ်ထဲတွင် အပြီးပိုင် ထုတ်မရနိုင်တော့လို့လည်း Jared Leto ရဲ့ယခု Joker ကို Joker လို့မမြင်မိခဲ့ပေ။ ကြောက်စရာလည်း မကောင်းခဲ့သလို စိတ်ဝင်စားဖို့လည်း မကောင်းခဲ့ဘူး။ ရုပ်ချောတဲ့ လူတစ်ယောက်က ရုပ်ဖျက်ပြီး ကြောက်ဖို့မကောင်း ကောင်းအောင် တမင်ဖန်တီးလုပ်ယူဖို့ကြိုးစားနေရတဲ့ သနားစရာလူတစ်ယောက်အသွင်ပဲ ထွက်နေခဲ့တယ်။
Jared Leto ဟာ Method Actor တစ်ယောက်ဖြစ်တယ်။ ဒီနေရာမှာ သူလိုအပ်သွားခဲ့တာကတော့ အလွန်အမင်း method ဆန်ခဲ့တာကြောင့် ပေါ့ပါးမနေပဲ သရုပ်ဆောင်နေတာကြီးဆိုတာ ပေါ်လွင်သွားခဲ့တာပဲ။ Heath Ledger ကိုကြည့်လိုက်ပါ။ သူသရုပ်ဆောင်တာ အလွန်ပေါ့ပါးတယ်။ သူ့ဇာတ်ကောင်စရိုက်ကို ပေါ်လွင်ခဲ့တယ်။ ကွာတော့ ကွာပါတယ်။ Heath Ledger ရဲ့Joker သည် အဖျက်သမား Ace of Knaves ဟုခေါ်ဆိုထိုက်ပြီး Jared Leto ရဲ့Joker သည် Clown Prince of Crime လို့ခေါ်ကြတယ်။
Jared Leto ဟာ အင်မတန်မှတော့ ကြိုးစားခဲ့ပုံရပါတယ်။ သူ ဇာတ်ဝင်ခန်းတွေမှာ ရယ်ဖို့ကိုတောင် ရယ်မောသံတွေကို အမျိုးမျိုးစမ်းသပ်ပြီး လေ့ကျင့်ခဲ့တယ်။ ထို့အပြင် သူ့ဇာတ်ကောင်စရိုက်ပေါ်လွင်အောင် ရိုက်ကူးရေးကာလတစ်လျှောက်လုံးလည်း အတူယှဉ်တွဲ သရုပ်ဆောင်ရတဲ့အခန်းတွေကလွဲလို့ ကျန်အချိန်များတွင် ကျန်သရုပ်ဆောင်များနှင့် မတွေ့ဆုံခဲ့ပေ။ ထို့အပြင် ရိုက်ကွင်းမှာ သူ သရုပ်မဆောင်နေတဲ့အချိန်တွေတောင်မှ သူသရုပ်ဆောင်တဲ့ဇာတ်ကောင်ထဲက လို ပြုမူပြောဆိုနေထိုင်ခဲ့တယ်။ Maggot Robbie ကို ကြွက်အရှင်တစ်ကောင် လက်ဆောင်ပေးခဲ့လို Will Smith ကိုလည်း ကျည်ဆန်အချို့လက်ဆောင်ပေးခဲ့တယ်။ Killer Croc အဖြစ်သရုပ်ဆောင်တဲ့ Adewale Akinnuoye-Agbaje ကိုတော့ Playbook Magazine ပေးခဲ့ပြီး ကျန်သရုပ်ဆောင်တွေအကုန်လုံးကို ဝက်သေတစ်ကောင်ရယ် (anal sex မလုပ်ခင် စအိုထဲကိုထည့်တဲ့ toy တစ်မျိုးဖြစ်တဲ့ Anal Bead) နှင့်အတူ အသုံးပြုပြီးသား Condoms တွေကို လက်ဆောင်ပေးခဲ့တယ်။ ဘာရည်ရွယ်ချက်တွေလည်းတော့ မသိပေမဲ့ ဇာတ်လမ်းနဲ့လည်း လားလားမှ မသက်ဆိုင်သလို ထိုအပြုအမူတွေလုပ်လို့လည်း ဇာတ်ကောင်စရိုက် ပိုမလာခဲ့ပါ။ အကောင်းဘက်က လှည့်တွေးပြီးပြန်ပြောနိုင်တာတစ်ခုကတော့ သူ ပါဝင်ခဲ့တဲ့ ဇာတ်ဝင်ခန်းအများစုကို တည်းဖြတ်သူတွေနောက်ဆုံးတည်းဖြတ်တော့ ပါမလာခဲ့ခြင်းကြောင့်ဟု ပြောဆိုပါက ပြောနိုင်ပါသည်။ (Trailers တွေထဲမှာ ပါဝင်ခဲ့တဲ့ တစ်ချို့အခန်းတွေဟာ နောက်ဆုံးရုပ်ရှင်မှာ မပါလာခဲ့တာတွေကို သေချာဂရုတစိုက်ကြည့်ပါက သိနိုင်ပါတယ်။)
ဘာကြောင့်သူတို့တွေ ယခုကဲ့သို့မြောက်မြားစွာသော ဇာတ်ဝင်ခန်းတွေကို ဖြတ်ပစ်ခဲ့ကြသလဲ။ ကြားရတဲ့သတင်းတွေအရ Joker ရဲ့ဇာတ်ဝင်ခန်းတွေသာမက တစ်ခြားဇာတ်ကောင်တွေရဲ့ဇာတ်ဝင်ခန်းတွေ အများစုကိုလည်း ဖြတ်ပစ်ခဲ့ကြတယ်။ ဇာတ်ကားတစ်ကားပြီးဆုံးသွားရင် တည်းဖြတ်သူဟာ မြောက်မြားစွာသော အခန်းတွေကို တည်းဖြတ်ပစ်တယ်ဆိုတာ သဘာဝကျပေမဲ့ သူဟာ သူ့ရဲ့လုပ်ငန်းကို မကျွမ်းကျင်ပါက တင်ပြပုံ ကမောက်ကမ ဖြစ်သွားနိုင်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့တွေ ရုံတွေမှာ ရုပ်ရှင်ကြည့်တယ်ဆိုတာ တင်ပြပုံ Presentation ကို စိတ်ဝင်စားလို့။ ဒါပေမဲ့ Suicide Squad ရဲ့တင်ဆက်ပုံဟာ ကြိုးတွေကိုတစ်ချောင်းနဲ့တစ်ချောင်းချည်ဆက်ထားသလိုပဲ။ ထိုချည်ဆက်ထားတဲ့ နေရာတွေက ကြိုးတွေပြေသလို ဇာတ်လမ်းဟာလည်း တစ်စစီဖြစ်ခဲ့ရတယ်။ BVS တောင်မှ အကျိုးနဲ့အကြောင်းနဲ့ယှဉ်ကြည့်လို့ရနိုင်သလို ဇာတ်လမ်းရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကို သိနိုင်ပေမဲ့ Suicide Squad ရဲ့ဇာတ်လမ်းရည်ရွယ်ချက်က ပျောက်ဆုံးနေခဲ့တယ်။ First Act ဟာ အလွန်ကောင်းခဲ့ပေမဲ့ Second Act ကနေ လျော့ပါးလာခဲ့တဲ့ ဇာတ်ဟာ Third Act ဟာ စိတ်ဝင်စားမှုတွေ မရှိတေ့ာဘူး။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ ယခုလို ဇာတ်လမ်းမျိုးတွေကို အကြိမ်ရေပေါင်း ရာနှင့်ချီ၍ ကျွန်တော်တို့မြင်ဖူးပြီးသား၊ ကြည့်ဖူးပြီးသား ဖြစ်နေခဲ့လို့ပဲ။
နိဂုံးအနေနဲ့ပြောရရင်တော့ အလွယ်တကူမေ့ပျောက်နိုင်တဲ့ ရုပ်ရှင်ဖြစ်ခဲ့ပေမဲ့ ကြည့်ပျော်ရှုပျော်ဖြစ်၍ Entertaining တော့ ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ ကျွန်တော်ရဲ့Personal အမြင်ကတော့ မျှော်လင့်ထားခဲ့သလို အကောင်းကြီး မဖြစ်ခဲ့ပေမဲ့ အဆိုးဆုံးဇာတ်ကားတစ်ကားလည်း မဟုတ်ခဲ့ပြန်ပါဘူး။ Deadshot ရဲ့Action ခန်းတွေဟာ ဒီဇာတ်ကားရဲ့Highlights တွေဖြစ်ခဲ့ပြီး ပရိသတ်တိုင်းဟာ Harley Quinn ကိုတော့ သဘောကျမိကြမှာ အမှန်ပါပဲ။ အတိုချုံးလိုက်ရင် အခြေအမြစ် ရေရေရာရာ မရှိတဲ့ ဇာတ်လမ်းကို တင်ပြရင်း ကြမ်းရမလား လွမ်းရမလား ဝေခွဲမရပဲ ဒွိဟတွေဝေကာ အဆုံးသတ်ကျမှ ခပ်မြန်မြန်တည်းဖြတ်လိုက်ခြင်းရဲ့အကျိုးမြတ်ရလာဒ်အနေနဲ့ယခု Suicide Squad ရုပ်ရှင်ထွက်ပေါ်လာခဲ့တော့တယ်။ သင်ဟာ Action ခန်းတွေကိုပဲ အာရုံစိုက်ပြီးကြည့်မယ်လို့တွေးပြီး ရုပ်ရှင်ရုံကို သွားမယ်ဆိုရင်တော့ ကျွန်တော်အားပေးပါတယ်။ လူတွေ အမျိုးမျိုးပြောကြလိမ့်မယ်။ ဝေဖန်ရေးဆရာတွေက မျိုးစုံဝေဖန်ကြလိမ့်မယ်။ ဘယ်သူ့စကားကိုမှ မယုံကြည်ပါနှင့်။ ကျွန်တော်အခု ပြောပြသွားတာတွေဟာလည်း ကျွန်တော့်ရဲ့ကိုယ်ပိုင်အမြင်တွေဖြစ်တာကြောင့် ရာနှုန်းပြည့် မယုံကြည်ပါနဲ့။ ကိုယ်တိုင် သွားကြည့်ပါ။ ကိုယ်တိုင် ခံစားပါ။ ကိုယ်ပိုင်ဝေဖန်ပါလို့ပြောရင်း ကျွန်တော် နိဂုံးချုပ်လိုက်ပါရစေတော့ ….
“မေးခွန်းမေးမယ်။ မင်း ငါ့အတွက်နဲ့သေပေးနိုင်မလား” လို့Joker ရဲ့အမေးကို Harley က မဆိုင်းမတွပြန်ဖြေခဲ့တယ်။ “သေပေးမှာပေါ့။” ဒီတော့ Joker က ပြန်ပြောတယ်။ “မဟုတ်သေးဘူး။ ဒါကအရမ်းလွယ်တယ်။ မင်း ငါ့အတွက် အသက်ရှင်နိုင်မလား။” ဒါကိုလည်း သူမ သဘောတူခဲ့တယ်။ ဒီနေရာမှာ အတွေးတစ်ခုချက်ချင်း ဝင်လာတာက လူတွေ အသက်ရှင်နေခြင်းဟာ သေဆုံးသွားခြင်းထက် ပိုမိုဆိုးရွားတယ်ဆိုတာပဲ။ အသက်ရှင်နေခြင်းဟာ ဒုက္ခတွေကို ခံစားဖို့ပဲ။ သို့သော် သို့သော် သေဆုံးခြင်းရဲ့မမြင်နိုင်တဲ့ နောက်ဆက်တွဲကရော …
“Desire becomes surrender. Surrender becomes power. You want this?”